Drafitry ny lesona: bundles - Ny valisoa valisoa
Home Drafitra fampianarana maimaim-poana Drafitry ny lesona: bundles
Mba hanomezana ny mpianatrao ny fianarana tsara indrindra momba ny sary vetaveta amin'ny Internet sy ny sexting, dia mamporisika anao izahay hampiasa ny lesona faran'izay lehibe.
Mba hijerena ny atin'ny lesona tsirairay dia kitiho ny sary bundle. Raha te hanana amboaram-pianarana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet fotsiny ianao na amin'ny sexting fotsiny, dia jereo eto ambany ilay fatorana mifandraika amin'izany.
Ny lesona dia azo alaina amin'ny fanontana UK, Fanontana Amerikanina ary Fanontana Iraisam-pirenena (Anglisy).
Fonosana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet
Ny bundles sary vetaveta amin'ny Internet dia misy lesona telo mifandraika amin'ny lafiny samy hafa amin'ny pôrnôgrafia. Nanampy lesona lesona bonus maimaimpoana koa izahay.
Manimba ve ny sary vetaveta? Ny ampahany voalohany dia lesona mahafinaritra sy ifanakalozan-kevitra izay iasan'ny mpianatra ho mpitsara hijerena porofo 8 momba sy hanohitra azy, avy amin'ny loharanom-baovao marobe, anisan'izany ireo mpitsabo, alohan'ny hahatongavan'izy ireo amin'ny fehin-kevitra voahevitra. Ilaina amin'ny fampisehoana amin'ny inspektera sy ny ray aman-dreny.
Ny ampahany faharoa dia mijery manokana ny fiantraikan'ny fahasalamana ara-tsaina amin'ny pôrnôgrafia ary ny fiantraikany amin'ny fahazoana sy fahatokisan-tena. Izy io koa dia mijery ny indostrian'ny pôrnôgrafia an'arivony tapitrisa dolara ary ny fomba fitadiavany vola rehefa maimaim-poana (indrindra) ny vokatra.
Ny fizarana fahatelo dia manadihady izay mahatonga ny tena fifandraisana akaiky eo amin'ny fifandraisana. Inona no vokatry ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny fanekena, fanerena, fanantenana ary ny fanaovana firaisana?
Ny lesona bonus dia fanavaozana ny lahateny TEDx malaza antsoina hoe "The Great Porn Experiment" izay manampy ny mpianatra hahatakatra ny fomba fanadihadian'ny siansa ny hetsika ara-tsosialy toy ny sary vetaveta maimaim-poana amin'ny Internet ary ny fiantraikan'ity fanandramana ara-tsosialy tsy voafehy ity amin'ny fahasalamana ara-nofo. Manazava ny siansa amin'ny fomba mora azo izy ary manome fanantenana ho an'ireo izay voafandriky ny pôrnôgrafia.
Miara-mandrakotra fitaovana manan-danja be dia be izy ireo mifototra amin'ny porofo farany mamela ny adihevitra momba ireo lohahevitra sarotra ireo amin'ny toerana azo antoka.
Sexting dia lohahevitra maro karazana noho ny hita amin'ny voalohany. Ity fonosana ity dia ahafahan'ny mpampianatra mizaha ireo olana isan-karazany miaraka amin'ny mpianatra mihoatra ny lesona telo amin'ny toerana azo antoka ary manana fotoana ampy hiadian-kevitra sy hianarana.
Ho an'ny fanontana UK dia manana fehezam-borona misy ampahany 3 izahay. Ny tapany voalohany dia mandray mpianatra amin'ny alàlan'ny karazana sexting isan-karazany, manontany momba ny risika sy valisoa ary ny fomba familiana ny fangatahana. Ny tapany faharoa dia mampianatra ny mpianatra momba ny fiasa tsy manam-paharoa ao amin'ny ati-dohan'ny tanora adolantsento, ny antony aniriany fatratra ny zavatra ara-nofo rehetra, anisan'izany ny pôrnôgrafia, ny sexting ary ny fanaovana risika. Ny tapany fahatelo dia miresaka momba ny mety ho fahitan'ireo sexting ireo raha ny fahitana azy ara-dalàna. Ahoana ny fomba itondran'ny lalàna ny sext ao amin'ny firenenao? Inona no fiantraikan'izany amin'ny asa ho avy raha taterina amin'ny polisy?
Noho ny tsy fitovian'ny lalàna any amin'ny firenena hafa, ny edisiona amerikana sy iraisam-pirenena dia tsy ahitana ny fizarana fahatelo momba ny lalàna. Ireo fonosana ireo dia misy fizarana roa amin'ny sexting. Na izany aza, izahay dia nanampy tamin'ny lesona bonus maimaimpoana momba ny pôrnôgrafia amin'ny Internet, antsoina hoe "The Great Porn Experiment" mifototra amin'ny lahateny TEDx malaza.